इरान र पाकिस्तानले अमेरिकी धम्की सुनेन :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
इरान र पाकिस्तानले अमेरिकी धम्की सुनेन २८ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकाको विरोधका बावजूद पाकिस्तान र इरानले दुई देशलाई जोड्ने बहुप्रतिक्षीत ग्यास पाइपलाइन विस्तारको काम थप अघि बढाएका छन् ।
पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली दर्जारी र इरानका राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजादले सोबार यस प्रोजेक्टको दोस्रो चरणको उद्घाटन गरेका हुन् । इरानमा पाइपलाइनको काम करीब-करीब ठिक भएको छ र अब पाकिस्तानतर्फ निर्माण सुरु भएको छ । आगामी २ वर्षमा कुल ७ सय ८० किलोमिटर लामो पाइपलाइन तयार गरिनेछ ।
ग्यास पाइप लाइन निर्माणपछि देशको गम्भीर उर्जा संकट कम हुने पाकिस्तानको विश्वास रहेको छ । यो पाइपलाइन प्रोजेक्टबारे सन् १९९४ मा कुराकानी सुरु भएको थियो । पाइप भारतसम्म ल्याउने बताएपनि सन् २००९ मा भारतले सम्झौताबाट हात झिकेको थियो ।
अमेरिकाले भने यो प्रजेक्टमा इरानको परमाणु कार्यक्रमसँग सम्वन्धित प्रतिवन्ध लाग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यो पाइपलाइन विस्तारले इरान धेरै ग्यास बेच्न सफल हुने र यसले उसको परमाणु कार्यक्रम रोक्न दबाव दिने प्रयास कमजोर हुने अमेरिकी तर्क छ ।
तर, पाकिस्तान सरकारले भने पाइपलाइन प्रजेक्ट पाकिस्तानको हितमा रहेको भन्दै अमेरिकी दबावसामू नझुक्ने बताएकाृ छ ।
4 Comments on “इरान र पाकिस्तानले अमेरिकी धम्की सुनेन”
bibek bhattarai wrote on 11 March, 2013, 16:10
aarise america chadai jalera nasta hune chha.
Bhuwan Giri wrote on 12 March, 2013, 6:01
अमेरिका अरुको प्रगति देख्न सक्दैन जस्तो लाग्छ…
damber ghale wrote on 13 March, 2013, 5:46
tyo pipe line nepal ma pani launu parcha balla petroleum ko dam 30 40 hunthyo hola. la la nepal sarkar la pani pahal garnu paryo
Nabin katuwal wrote on 14 March, 2013, 14:50
America ko dashaa graha bigrera ho esto gareko America aba chaadai kharaani hudai 6….